Heshiiska ka dambeeya dagaalka lamaanaha marxalad dareen aad u macaan wadata. | alcarabiya.com
Nolosha, Talooyin Jaceyl, Warka Manta
Heshiiska ka dambeeya dagaalka lamaanaha marxalad dareen aad u macaan wadata.
Isku soo laabashada dagaal kadib ama ku kala maqnaashaha xanaaqa marwalba waa dareen cajiib ah. Labadiinaba waxaad isku maslaxeysaa dareeno xambaarsan xiisahii kala maqnaashaha,waxaana dad badan aaminsan yihiin inuu ka sii dhasho xiriir jaceyl aad u macaan badan.
Marka aad habeysaa arintaa waxaa muhiim ah inaad xusuusnaataa.
Qeex sababaha aad dib ugu heshiiseen. Muhiim ma’ahan in horey laga heshiiyo,islamarkaana leysku ooyo keliya,laakin xusuusnaaw sababta aad ula heshiineyso dagaalkii iyo caradii aad ku kala maqneydeen! Xusuusnow inaad adiga iyo jaceylkaaga ka wada hadashaan sidaad uga fogaan laheydeen qilaafkan oo kale inuu mustaqbalka ka dhaco.
Adkey heshiishyada Marka aad heshiis wada sameysataan adiga iyo lamaanahaaga xoogaa isbedel ah aad sameyneysiin waa inaad isla ogaatiin sida loo sameynaayo iyo qaabka lagu hirgelin karo xiriirkiina.
Adkey! Lamaanayaal badan waxey gaaraan heshiisyo marka ay isku soo laabtaan,laakin waxey ku dhamaataa ayagoo ilaawan waxaaney dib ugu laabtaan mashaakilkii hore.	Hadii aadan ixtiraamin oo aadan raacin heshiisyada cusub, waxaad arkeysaan adinkoo ka murmaaya arimo la mid ah kuwii hore marar badan.
Hubi in jaceylkiinu marwalbo ahaado mid xiiso badan,si xiriirkaas uu usii jiro.Hadii aad joogteyso xiriirkaasi si toos ah lamaanayaasha waxey xooga saari karaan waxyaabaha ay ku hormarin karaan xiriirkooda sida ayagoo hadiyado fudud is weydaarsado.
← Fariimo Jaceyl: Dadkuba Ha Ila Yaabeene! Jaceylkaagu Waa Waxa Keliya Aanan Fileyn Inaan Ka Shalaayo.
U Gaar Dumarka : 3-Arin Oo Aad Ku Iloowi Kartid Xasuusta Jaceylkaadii Hore →
Gaabshe	November 1, 2013 at 8:45 am
Maasha allah waa seko aad umac
Kamaal	November 1, 2013 at 5:56 am
Asc waanka hela diyar garowga farimahan
baashi	October 29, 2013 at 4:45 pm
Asc aqyarta sharafta Leh wiil iyo gabar waa wax jiro arintaan walasheen ino sheegtay mar Alle ha isku deysto 2 badi is caashaqday Mustaqbal wanag san Anka rajeyneena Alle xagiisa waana Arin 2 bil kahor igu dhacday waana mahad san tihiin lkn Hada howsha gaba gabaee maree faataxada igu soo kaba
Dadax axmed	October 23, 2013 at 12:02 am
Dhaman wan idin salamay bahda al carabiya ASC qasatan fardowsa inta kadib Run ahaan Khilaafka dadka is jecel waa qayb kamid ah jcylka qofki arkay wuu arkay kiin aan aragna waa laga yabaa inuu arko
Safiyo aanhelinraaxo	October 21, 2013 at 10:24 pm
Kkkkkk iidoon cido jirin hadeydagaalan eehishiiyaan edagalan markadabtalo waxaasobaxaa talo iyo isfahan wixi qaldana lasaxo ambo sidhab ah lookalatago toos nxt to biiiiiiiiiiriiiiii waaaaaaa kkkkkkkkkkkk jcl w
Jaabir yare	October 18, 2013 at 5:01 pm
Asc wan ku salamay walashey fardowsa
Jaabir yare	October 18, 2013 at 4:59 pm
Abdulaahi Abdirizak	October 17, 2013 at 1:50 pm
Fardowso wan ku salamay wlshy waani gabdhaha da’ada yar
F n d	October 14, 2013 at 10:32 pm
Asc slnkadib qeyr iyo barwaaqo kkkkkkkkkkkkkkkkk mashaa alaah wakahela diyaargalawga nabada fariimahaan aneey igusocdaan wasodhawooyhaa nabada ambo wado fcn wakasoo horjeedaa fowdo adne kafogaaw fowdo raadi waxka fcn